08/10/2018 - Page 2 sur 4 -
Efa any Inde : Mbola miandry fandidiana i Eric
Mbola tsy feno ny fepetra. Telo volana taorian’ny nandehanany, mbola eo am-piandrasana ny fandidiana azy i Eric ao amin’ny tarika Fou Hehy. Efa any an-toerana miandry sy manatanteraka izay rehetra ilaina amin’ny fandidiana izy sy …Tohiny
Fotoam-pahavaratra : Hatanjaka ny rivodoza handalo eto Madagasikara
Manoloana ny fivoaran’ny toetran’ny atmosfera sy ny ranomasina amin’izao, dia vinavinaina hatanjaka, ary hifanaraka amin’ny tokony ho izy ny vanim-potoanan’ny rivodoza eto Madagasikara amin’ity taona 2018-2019 ity, hoy ny sampana mpamantatra ny toetr’andro. Izany hoe, …Tohiny
Manjakandriana : Trano enina no indray voatafika
Nirefotra indray ny basy. Tokantrano miisa enina no nasesin’ireo dahalo nilanja fitaovam-piadiana notafihana tany Ambakona fokontany Anjomaka, kaomina Betoho distrikan’i Manjakandriana, ny alin’ny sabotsy hifoha alahady tokony ho tamin’ny 2 ora maraina. Araka ny fanazavana …Tohiny
Fampielezan-kevitra : Nisokatra tamin’ ny enina ora maraina
Samy efa mihomana avokoa ireo kandidà miisa 36 amin’ izao fiatombohan’ny fampielezan-kevitra izao, nisy tamin’ izy ireo no nitondra am-bavaka ny iray volana ho avy omaly. Raha ny omaly no atao jery todika, dia kandidà …Tohiny